Kolontsaina - News Travel | Vaovao momba ny dia (Pejy 2)
Argoitia, ny toerana anaovana ny 'surnames Eight Basque', dia tsy misy. Mba hamoronana azy dia nalaina ny ampahany amin'ny tanàna toa an'i Zarautz, Zumaya na Guetaria.
San Miguel de Escalada dia iray amin'ireo zava-mahatalanjona an'ny Espaniola talohan'ny Romanesque. Azonao atao ny mitsidika azy ao amin'ny tanànan'ny Gradefes, faritanin'i León.
Ny Parador de León na Convent of San Marcos dia firavaka firafitra iray izay hahatsapanao fa nafindra amin'ny fotoana lasa ianao.
Miaina ao anatin'ny tontolo isan-karazany isika ary io fahasamihafana io no mahaliana antsika indrindra amin'ny maha-karazany iray. Ho hitantsika anio ny ...
Ireo zava-mahatalanjona fito eto amin'izao tontolo izao
Hatramin'ny 2007 dia misy Fahagagana vaovao 7 amin'ny tontolo maoderina voafidy tamin'ny fanadihadiana manerantany mihoatra ny 90 ...
Telozoro Bermudes miafina
Raha misy zava-miafina fa ny tontolon'ny sinema sy ny fahitalavitra dia nanome sakafo tamin'ny angady ary nandritra ny taona maro, dia ...
Androany ny tontolo maoderina dia nisafidy ny fahagagana manokana, fa ara-tantara ny Fahagagana amin'ny tontolo taloha dia ny ...
Any amin'ny tranobe mahafinaritra sy afovoan'ny taonjato faha-XNUMX eo amin'ny arabe Ventura Rodríguez, ny tranombakoka Cerralbo dia iray ...
Monasiteran'ny Royal Barefoot
Minitra vitsy avy eo Puerta del Sol dia ny Monasiteran'ny Royal Barefoot, trano izay ivelany ...
Aiza i Nouvelle Zélande
Nouvelle-Zélande, iray amin'ireo toerana misy ala mahafinaritra indrindra sy voatahiry tsara indrindra eto ambonin'ny planeta. Tsy kisendrasendra ny ...
Ny fambolena ny voaloboka dia lasa zavakanto any Espana. Tsy mahagaga, araka izany, ...
Tamin'ny taona 60, ny governemanta Espaniola dia namorona hetsika fampielezan-kevitra hisarika ny mpitsidika an'i Espana izay namoaka ...
Teatra romana an'i Mérida
Any andrefan'i Espana dia misy an'i Mérida, renivohitr'i Extremadura, izay natsangan'ny Romana tao amin'ny ...
Ankafizo ny tsenan'ny Medieval an'ny Vitoria
Tamin'ny herinandro lasa teo izahay dia niresaka momba an'i Treviño, ireo lava-bato ary ny faniriany ho ao amin'ny Firenena Basque. Miverina ho an'ireo ...
Any amin'ny faritra avo indrindra amin'ny havoana izay nanorenan'ny vohitra voalohany an'i Gasteiz fa ...
Curiosities eto amin'izao tontolo izao
Goavana tokoa ny planetantsika ka maro ny fahalianana eto amin'izao tontolo izao izay manampy antsika hahatakatra ny kolontsaina ...
Ahoana ny fomba hitsidihana an'i Parc Güell
Ny lova maoderina an'i Antonio Gaudí any Barcelona dia mahavariana: Casa Batlló, Sagrada Familia, Casa Milà… Raha tsy misy…
Ny rava rava manan-danja indrindra
Asehonay aminao ny sasany amin'ireo rava romanina an'ny Fanjakana Romanina izay mbola azo tsidihina any amin'ny firenena samihafa.
Banky eto an-tany
Betsaka ny firenena ary noho izany maro ny vola. Tahaka ny ankehitriny ny firenena sasany any Eropa dia mizara ny ...
Aiza no handehanana hianatra anglisy
Ny tombony lehibe azo amin'ny fahalalana fiteny iray dia ny fahaizana mifandray amin'ny hafa, ka rehefa mianatra fiteny iray ianao dia ...
Tapakilan'ny tranombakoka Vatikana
Any afovoan'i Roma, tanàna mandrakizay, i Vatikana no firenena kely indrindra eran'i Eropa sy ...
Ny tsiambaratelo sy ny antsipirian'ny Trajan's Column
Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra momba ny Colombo an'i Trajan, any Roma, izay manolotra fanampiana kely mitantara ny adin'i Trajan.
Dihy eran-tany manaitra 7
Ny Folklore dia andiam-pomban-drazana kolontsain'ny olona mamorona ny mombamomba azy ary ampitaina amin'ny taranaka mifandimby ...
Ny Palace of the Dukes of Infantado, any Guadalajara, no trano tsara tarehy indrindra ao amin'ny tanànan'i Castilian-La Mancha. Tsangambato nambara ...
Amerika dia kaontinanta manan-karena amin'ny kolontsaina sy ny tantara ary ny tapany manana lova Maya lehibe izay tsy voafetra ho any Meksika, toa an'i Guatemala sasany tsy tonga saina dia tany manankarena amin'ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao, ny sasany dia nipoitra talohan'ny fiteny Hispanika, ny hafa nolovaina tamin'ny Espana. Gaga ny tenanao miaraka amin'izy ireo!
Fomba amam-panao Kiobàna
Vokatry ny fifangaroan'ny kolontsaina, tao anatin'ny dingana iray izay naharitra taonjato maro, kolontsaina tsy manam-paharoa an'ny ...
Fomba amam-panao Alemanina
Ny fomba amam-panao any Alemana dia milaza amintsika betsaka momba ny fomba fiainany sy ny toetran'ny Alemanina, zavatra manan-danja hitsangatsangana any.
Fomba amam-panao Koreana Tatsimo
Nandritra ny fotoana vitsivitsy, angamba folo taona lasa izao, i Korea atsimo dia teo amin'ny sarintanin'ny kolotsaina malaza. Fa maninona Handeha any Korea Atsimo ve ianao noho ny fombanao mozika? Azo antoka fa tianao ny tantara an-tsehatra sy k-pop fa alohan'ny handehananao tongotra any, ahoana no ahalalanao zavatra momba ny fomba amam-panao Koreana?
Rehefa manomana dia maro isika dia misy zavatra tsy maintsy eritreretintsika mba handehanan'ny zava-drehetra ...
Fomba amam-panao Arzantina
Firenena mpifindra monina i Arzantina, na dia be dia be aza ny jeografia misy azy ka miankina amin'ny làlana alehanao no ahafahanao mifandray amin'ireo fomba amam-panao izay handehananao any Arzantina ary te hahafantatra bebe kokoa? Avy eo fantaro ny sasany amin'ny fomban-drazany, sakafo, zava-pisotro mahazatra, fihetsika ary fomba amam-panao eo amin'ny fiaraha-monina.
Japon no toerana tiako indrindra, azoko lazaina ny toerako eto amin'izao tontolo izao ao ambadiky ny firenena nahaterahako. Tiako be i Japon ka nanao vakansy nandritra ny telo farany aho. Ho any Japon ve ianao? Avy eo fantaro ny momba ny fomba amam-panao Japoney manan-danja indrindra hahafantarana ny fomba fihetsika manoloana azy ireo. Ary iza amin'ireo tsy azonao atao!
Ny sarimihetsika amerikana sy ny andian-tantara dia naneho taminay ny fomba amam-panaon'ny Amerikanina matetika. Azontsika atao angamba ...
Ny akanjo mahazatra an'ny firenena dia santionany ara-kolontsaina sy ara-tantara amin'izany. Amin'ny tranga Kolombiana, folklore ...
Akanjo mahazatra any Mexico
Ny fitafiana mahazatra an'ny firenena, toy ny gastronomie na mozika, dia fanehoana ny tantaram-piainany. On…
Inona no ho hita ao Ronda
Ronda dia iray amin'ireo tanàna tranainy sy tsara indrindra any Espana. Any amin'ny faritanin'i Malaga no misy azy ary ...
Oxford hampiantrano fampirantiana ao Tolkien amin'ny taona 2018
Amin'ny taona 2018 dia hisy fampirantiana lehibe momba ny endrik'i JRR Tolkien any Oxford izay hampanantena hisarika ...
Mankalaza ny taom-baovao sinoa 2018 izao tontolo izao amin'ny fomba
Ny zoma lasa teo dia nankalaza ny taona vaovao ny vondrom-piarahamonina sinoa, indrindra ny 4716 araka ny kalandrie, ny fialantsasatra nentim-paharazana indrindra ...
Roa ora miala an'i Amsterdam no misy ny tanàna Holandey, Leeuwarden, izay malaza amin'ny farihy sy lakandrano ary koa ...
Hisokatra voalohany ho an'ny besinimaro ny Colosseum ao anatin'ny 40 taona
Nirahin'i Vespasian ary notontosain'i Titus zanany tamin'ny taona 80, ny Colosseum dia tandindon'ny ...
Ny Thyssen Museum dia mankalaza ny faha-25 taonany amin'ity volana Oktobra ity
Ao amin'ny Paseo del Prado any Madrid no ahitanao ilay antsoina hoe 'telolafy kanto' na ...
Ny lapan'ny Infante Don Luis de Boadilla del Monte
Iray amin'ireo tsangambato espaniola tsy fantatra indrindra ny Palacio del Infante don Luis ao Boadilla del Monte. Hita…
Akanjo mahazatra an'i Ekoatera
Jereo ny akanjo mahazatra an'i Ekoatera miankina amin'ny faritra. Manao ahoana ny fitafiana ataon'ireo vahiny mandeha any? Jereo!
Jereo ny akanjo mahazatra an'i Brezila, sy ny akanjo anaovany arakaraka ny fotoan'ny taona sy ny faritra. Inona ny akanjo any Brezila? Jereo eto!
Nanokatra ny varavarany ny Madrid Book Fair 2017
Herintaona indray dia manokatra ny varavarana ao amin'ny Paseo de Cocheros del Parque del ny Madrid Book Fair ...
Tranombakoka mahafinaritra 5 hotsidihina miaraka amin'ny ankizy sy toro-hevitra amin'ny fanaovana azy
Notokanana ny 18 mey, Andro fankalazana ny tranom-bakoka iraisam-pirenena, daty mety tsara hahatsiarovana ny ...
Jereo hoe iza ny tranombakoka eoropeanina ilaina hitsidika. Miaraka amin'ny sanganasa manan-danja indrindra sy ny zotram-pitaterana mahaliana.
Chiang Mai, ilay raozy avaratr'i Thailand
Chiang Mai, renivohitry ny avaratry Thailandy, dia fialantsasatra avy ao amin'ny ramevan'i Barngkok. Fantatra izy ...
Ny làlana mamakivaky ny dingana amin'ny Game of Thrones any Spain
Ny andiany fahita lavitra, izay lamaody tato ho ato, dia lasa dokambarotra mpizahatany tsara indrindra ho an'ny ...
Fomban-drazana ara-nofo isan-karazany izay hitanao manerana an'izao tontolo izao
Ireto avy ny 5 amin'ny fomban-drazana ara-nofo isan-karazany izay hitanao manerana an'izao tontolo izao. Fantatrao bebe kokoa ve? Tianay ho fantatra izany.
Ayurveda, any India, ny siansa fiainana
Amin'ity lahatsoratra mandeha ity dia tianay ny hampahafantatra anao ny fomba fanao taloha any India: Ayurveda, na izay mitovy, ny siansa fiainana.
Fitsidihana ny Castillo de los Guzmanes any Niebla, Huelva
Mitsidika ny Castillo de los Guzmanes any Niebla, Huelva, 20 minitra monja miala ny tanàna isika. Trano voatahiry tsara sy tsy maintsy ho hita.
Vondron'olona avy any Afrika